काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक हरेक स्थानीय तहमा टोली खटाइएको छ : डा.जनार्दन खड्का - eagronews.com
काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक हरेक स्थानीय तहमा टोली खटाइएको छ : डा.जनार्दन खड्का
By eagronews ४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०७:०३
लक डाउनको समयमा कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेले के काम गरिरहेको छ ?
हाम्रो कार्य क्षेत्र काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोक दुई जिल्ला हुन् र ती दुई जिल्लाका २५ वटा स्थानीय निकाय छन् । ती सबै स्थानीय निकायमा हामीले माटो विज्ञान, बाली संरक्षण लगायतका विषयगत विज्ञहरू सहितको टोली खटाएका छौँ । उहाँहरूले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहनु भएको छ । हामीले कार्यालय पनि नियमित रूपमै खोलिरहेका छौँ । स्थानीय रूपमा बसोबास गर्ने कर्मचारी साथीहरू नियमित रूपमा जानुहुन्छ भने हामी टाढा घर भएकाहरू पनि अनुकूलता मिलाएर गइरहेका छौँ । कार्यालयमा किसान आउने सम्भावना छैन । तर पनि टेलिफोनबाट नियमित रूपमा सोधपुछ र जानकारी दिने काम भइरहेको छ ।
विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन् । तिनीहरूमध्ये सम्झौता भएर काम सुरु गरेका कामहरूको अनुगमन र सम्झौता प्रक्रियामा रहेकाहरूको कामको टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ । त्यो काम पनि हामीले अनलाइन रूपमा गरिरहेका छौँ । किसानले सबै कुरा स्पष्ट हुने गरी विवरण पठाउने, त्यसको क्रस चेक गर्ने काम पनि हामीले अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ ।
लक डाउनले गर्दा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका किसानले कस्तो समस्या भोग्नु परिरहेको महसुस गर्नु भएको छ ?
समस्या नपर्ने त कुरै भएन । मकैको मूल बीउ ल्याउन गाह्रो परिरहेको छ । त्यसैले उन्नत बीउबाट काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । मल, बीउ विजनदेखि हरेक कुरामा समस्या परिरहेको छ । उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारमा पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको छ ।
सरकारले कृषि उपजको ढुवानीमा अवरोध नगर्ने भनेको छ, तर पनि किसानले सहज रूपमा आफ्ना उत्पादन बजारमा लैजान सकिरहेका छैनन्, यसमा तपाइहरूले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने होइन ?
सुरुमा केही जटिलता थियो । प्रहरी प्रशासनले अवरोध पनि गरेका थिए । हामीले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेकोले त्यस्तो अवरोध हटेको छ । अहिले ढुवानीको भन्दा पनि अरू नै समस्या छ । जस्तो कि किसानलाई आवश्यक पर्ने मल बीउ, विजनका पसलहरू खुलेका छैनन् । त्यसैले किसानले नियमित रूपमा कृषि कर्म गर्न पाएका छैनन् । नयाँ बालीको लागि तयारी गर्न पाइरहेका छैनन् ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई आवश्यक पर्ने तरकारीको २५ प्रतिशत आपूर्ति काभ्रेबाट हुन्छ । तर, अहिले काठमाडौँका अधिकांश बजारहरू बन्द छन्, खुद्रा कारोबार पनि कम छ । उपभोक्ता घरबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । त्यसैले काठमाडौँमा माग नै कम छ । माग कम भएपछि किसानले चाहेर पनि बजारमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।
गाउँकै मकै खरिद गरेर विपन्नलाई